လူတစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း(၈)မျိုး ဆိုတာ - Thutazone
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။
“သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရင် လျှောက်တဲ့လမ်းက ဖြောင့်သွားတယ်”တဲ့။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲမဆက်သွယ်တိုင်း၊ အမြဲမတွေ့ဆုံမိတိုင်း မေ့သွားပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဟောင်းနွမ်းသွားလို့ရပေမယ့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက ယုတ်လျော့သွားလို့ မရဘူး။
သင့်ဘဝတစ်သက်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းကောင်း ဘယ်နှယောက်ရှိနိုင်မလဲ?
တကယ်လို့ အထက်က သူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ သင်ကြုံဆုံလာတဲ့အခါ သူတို့ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလိုက်ပါ။
လူတဈယောကျအတှကျ မရှိမဖွဈတဲ့ သူငယျခငြျး(၈)မြိုး ဆိုတာ (unicode)
ရေးသားသူ – နိုငျးနိုငျးစနေ
သူငယျခငြျး မိတျဆှတှေနေဲ့ပတျသကျတဲ့ စကားတဈခှနျးက ဒီလိုဆိုထားပါတယျ။
“သူငယျခငြျးမိတျဆှမြေားရငျ လြှောကျတဲ့လမျးက ဖွောင့ျသှားတယျ”တဲ့။
သူငယျခငြျး မိတျဆှတှေေ အသဈတိုးတာ မငျ်ဂလာတဈပါးပါ။ လူတိုငျး သူငယျခငြျးအသဈတှနေဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးနိုငျဖို့ မြှောျလင့ျကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ (American Sociological Review，ASR)က သူတို့လေ့လာဆနျးစဈခဲ့တဲ့ ဆနျးစဈခကြျအရ အခုခတျေလူတှမှော သူငယျခငြျးတှေ နညျးသထကျနညျးခဲ့ကွတာကို တှေ့ရတယျ။ လေ့လာဆနျးစဈခံရသူ ၄ပုံ၁ပုံက သူတို့မှာ သူငယျခငြျးနညျးရတဲ့အကွောငျးက ဘယျသူ့ကိုမှ ယုံကွညျလို့မရကွောငျး ဆိုထားကွတယျ။
လငြျသူစားစတမျး၊ သာသူမွတျဆိုတဲ့ ခတျေကာလကွောင့ျ လူအခငြျးခငြျးကွားမှာ ဘယျသူက အစဈအမှနျ၊ ဘယျသူက အတုအယောငျဆိုတာကို ခှဲခွားဖို့ခကျခဲသှားတယျ။ “သူငယျခငြျး”ဆိုတဲ့ အခေါျကိုလညျး ကြှနျတောျတို့ ထိတျလန့ျလာခဲ့ကွတယျ။
ဒီလိုဆိုရငျ ဘယျလိုအရာမြိုးကို သူငယျခငြျးအစဈအမှနျလို့ ခေါျသလဲ? လူတဈသကျမှာ အဲဒီလို သူငယျခငြျးမြိုး ဘယျနှယောကျလိုသလဲ?
အမရေိကနျစာရေးဆရာ Todd Parrက “အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငြျးတဈယောကျဆီကနေ သငျလိုခငြျတဲ့အရာတှေ ရလိမ့ျမယျလို့ မမြှောျလင့ျပါနဲ့”လို့ ဆိုထားတယျ။ အမရေိကနျစာရေးဆရာ Tom Rathက လူတဈယောကျမှာ မရှိမဖွဈတဲ့ သူငယျခငြျး(၈)မြိုး လိုအပျတယျဆိုပွီး အခုလို့ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
(၁) ဆရာနဲ့တူတဲ့ သူငယျခငြျး
သူတို့က သင့ျကောငျးကှကျတှေ သငျကိုယျတိုငျ သိမွငျနိုငျဖို့ သင့ျကိုအမွဲကူညီအားပေးတယျ။ ဒီလို သူငယျခငြျးမြိုးကို ဆရာအမြိုးအစားလို့ခေါျတယျ။ သူတို့က သင့ျရဲ့ဆရာဖွဈခငြျမှဖွဈမယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့မှာ အခွားဗဟုသုတ၊ အတှေ့အကွုံတှနေဲ့ ပွည့ျစုံတယျ။ သင့ျရဲ့အလုပျအကိုငျ၊ မိသားစု၊ လူလူခငြျး ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးတှမှော သူတို့က သင့ျကို အကွံဉာဏျတှပေေးနိုငျတယျ။ လူ့ဘဝမှာ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက သင့ျစိတျကို ထောကျကူပေးတဲ့သူဖွဈတယျ။ သူတို့ဟာ သင့ျအနားမှာ အမွဲရှိနပွေီး သငျအတုယူထိုကျသူလညျးဖွဈတယျ။
သင့ျကို ဆုံးမလမျးညှှနျပွီး လူတှရှေေ့မှာ သင့ျကိုခြီးမှမျးစကားပွောတဲ့ သူငယျခငြျး… ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက “နင့ျ ငါ့ကိုကူ၊ ငါ နင့ျကိုကူ”ဆိုတဲ့ အခငြျးခငြျး ကူညီအားပေးတဲ့သူဖွဈတယျ။ ဘဝရှငျသနျကွီးပွငျးရာ လမျးတဈလြှောကျမှာ သူငယျခငြျးရဲ့ ဖေးမကူညီမှု၊ ခြီးကြူးမှုတှကေ အဖိုးတနျလှနျးတယျ။ ဆငျးရဲဒုက်ခ၊ အခကျအခဲတှနေဲ့ သငျရငျဆိုငျရခြိနျ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက သင့ျအခကျအခဲတှကေို ကူညီမြှဝဖွေရှေငျးပေးတယျ။ သင့ျရငျထဲက ဖိအားကို လြော့ခပြေးတယျ။ သူတို့ရဲ့ယုံကွညျမှုက သင့ျအတှကျ စိတျဓာတျအားဆေးဖွဈတယျ။
(၃) စိတျတူကိုယျတူ သူငယျခငြျး
သငျနဲ့ ဝါသနာတူသူက သငျနဲ့ပေါငျးဖကျဖို့ အသင့ျတောျဆုံး သူငယျခငြျးဖွဈတယျ။ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးနဲ့ အတူနခြေိနျ သင့ျစိတျက သူတို့စိတျနဲ့ အာရုံခံစားမှုခငြျးတူတယျ။ ဒါကို “နားလညျမှု”လို့ခေါျတယျ။ သင့ျပွောတဲ့စကား၊ သင့ျတှေးတဲ့အတှေးတှကေ သူတို့အတှေးတှနေဲ့ ထပျတူနီးနီးကတြယျ။ စိတျခငြျးကူညီအားပေးတဲ့ ခံစားမှုမြိုးကိုရတယျ။ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက သင့ျကိုယျသငျ အသိအမှတျပွုလာအောငျ ကူညီပေးသလို သင့ျဝါသနာ၊ သင့ျရညျမှနျးခကြျ၊ သင့ျအကွိုကျတှကေို သူတို့နဲ့အတူ မြှဝခေံစားနိုငျတယျ။ ဒီလို မြှဝခေံစားမှုမြိုးက သင့ျစိတျကို လုံခွုံစတေယျ။ မိမိကိုယ့ျကို ယုံကွညျမှုရှိစတေယျ။ စိတျကူးကို အလှယျတကူ အကောငျအထညျပေါျစတေယျ။ သင့ျဘဝကို ပြောျပြောျရှှငျရှှငျနဲ့ ရှငျသနျကွီးပွငျးစပေါတယျ။
(၄) တံတားခငျးပေးတဲ့ သူငယျခငြျး
ဒီလိုလူမြိုးက ကူညီတဲ့သူငယျခငြျး အမြိုးအစားဖွဈတယျ။ သငျ အားရကြနေပျ ပြောျရှှငျခြိနျမှာ သူတို့ရဲ့အရိပျတှကေ သင့ျအနားမှာရှိမနဘေူး။ သင့ျ စိတျညဈအားငယျ ကွကှေဲခြိနျကမြှ သင့ျရှေ့မှောကျ ရောကျလာတတျသူတှဖွေဈတယျ။ သငျယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ ကူညီမှုမြိုးကို သူတို့ပေးတယျ။ မြှောျလင့ျခကြျနဲ့ အခှင့ျအရေးကို သငျပွနျမွငျရဖို့ သူတို့စှမျးဆောငျပေးတယျ။ စိတျဓာတျတှေ အရောငျတောကျအောငျ သူတို့မပွတျကူညီပေးတတျတယျ။
(၅) အားပေးဖောျ သူငယျခငြျး
ဒီလိုလူမြိုးက သင့ျကိုပေါ့ပါးလနျးဆနျးစတေဲ့ သူငယျခငြျးဖွဈတယျ။ တခြို့သူငယျခငြျးတှကေ သင့ျကိုခငျမငျရငျးနှီးပွီးတာနဲ့ သင့ျကို တခွားစိတျတူကိုယျတူ သူငယျခငြျးတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးတယျ။ သင့ျစိတျတှေ မှနျးကွပျတဲ့အခါ၊ စိတျညဈတဲ့အခါ သူတို့က သင့ျရငျဖှင့ျသံကို ပထမဦးဆုံး နားထောငျပေးသူတှဖွေဈတယျ။ ဒီလို သူငယျခငြျးမြိုးက သင့ျအတှကျ အကောငျးဆုံးနားထောငျသူဖွဈတယျ။ သင့ျစိတျကို ဖွလြေော့စတေယျ။ သူတို့နဲ့ပေါငျးသငျးရတာ သင့ျကို ဘာစိတျဖိအားမှ မရှိစတေဲ့အပွငျ သင့ျရငျထဲက မှနျးကွပျနတေဲ့အရာတှကေို ထှကျပေါကျပေးစတေယျ။ သင့ျရဲ့ တညျငွိမျအေးခမြျးတဲ့စိတျကို အသဈတဈဖနျ မှေးဖှားစပေါတယျ။
(၆) အသိအမွငျတိုးပှားစတေဲ့ သူငယျခငြျး
သင့ျကို ဆနျးသဈတဲ့အမွငျ၊ ဆနျးသဈတဲ့အခှင့ျအရေးတှကေို တှေ့မွငျစတေဲ့သူငယျခငြျးဖွဈတယျ။ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးလညျး ဘဝမှာ မရှိလို့မဖွဈပါဘူး။ သူတို့ဟာ သင့ျရဲ့ “ကမ်ဘာ့စာကွည့ျတိုကျ”ဖွဈတယျ။ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက သင့ျအသိဉာဏျ၊ ဗဟုသုတ၊ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကို ကယြျပွန့ျစတေယျ။ သင့ျကို မတူတဲ့စိတျခံစားမှုမြိုးကို ခံစားစတေယျ။ သင့ျကို မွင့ျမွင့ျရပျ၊ ဝေးဝေးလှမျးကွည့ျတတျဖို့ သငျပေးသူတှဖွေဈတယျ။
(၇) လမျးပွသူ သူငယျခငြျး
သင့ျစိတျကူးအတှေးတှကေို သန့ျရှငျးကူညီပေးသူ၊ လမျးပွအကွံပွုတဲ့ သူငယျခငြျးမြိုးဖွဈတယျ။ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက လမျးပွမီး အမြိုးအစားဖွဈတယျ။ လူတိုငျးမှာ လိုအပျခကြျနဲ့ အကူအညီဆိုတာ လိုအပျတယျ။ တခြို့အခကျအခဲတှကေို သင့ျကိုယျပိုငျစှမျးအားနဲ့ ဖွရှေငျးဖို့မလှယျကူတဲ့အခါ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက သင့ျကို စိတျပါလကျပါကူညီပွီး အသင့ျတောျဆုံး အကွံတှကေိုပေးတယျ။ သင့ျစိတျရှုပျထှေးတဲ့အခါ၊ စိတျညဈတဲ့အခါပဲဖွဈဖွဈ သူတို့ကို သငျရငျဖှင့ျနိုငျတယျ။ သူတို့က ရှုပျထှေးနတေဲ့ သင့ျစိတျကို ကူညီသန့ျရှငျးပေးပွီး ကွညျလငျတဲ့ဖကျကို လမျးညှှနျပေးတယျ။
(၈) သင့ျကိုအဖောျပွုတဲ့ သူငယျခငြျး
ကောငျးတဲ့သတငျးပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆိုးတဲ့သတငျးပဲဖွဈဖွဈ သူတို့ကိုအရငျ သငျပွောပွတယျ။ သူတို့ဟာ သငျနဲ့ အမွဲအတူရှိနတေယျ။ ဒီလိုသူငယျခငြျးမြိုးက ပငျလယျထကျကယြျတဲ့ ရငျခှငျရှိတယျ။ တောငျတနျးတှလေို မွင့ျမားတဲ့ စိတျသဘောထားရှိတယျ။ သူတို့ကို သငျဘယျအခြိနျသှားရှာခဲ့ရှာခဲ့ သူတို့က သင့ျကိုနှေးနှေးထှေးထှေး ကွိုဆိုတယျ။ သူတို့က သင့ျအတှကျ စိတျပွည့ျဝ၊ တညျငွိမျစတေဲ့ သူငယျခငြျးဖွဈတယျ။ တဈခါတလေ ပွောစရာ စကားမြားမြားစားစား မရှိခငြျနေ သင့ျအနားမှာ သူတို့ရှိတယျဆိုရငျပဲ သင့ျစိတျကို တညျငွိမျအေးခမြျးစပေါတယျ။
သူငယျခငြျးတှနေဲ့ အမွဲမဆကျသှယျတိုငျး၊ အမွဲမတှေ့ဆုံမိတိုငျး မေ့သှားပွီလို့ မဆိုနိုငျပါဘူး။
သူငယျခငြျးဆိုတာ ဟောငျးနှမျးသှားလို့ရပမေယ့ျ ခငျမငျရငျးနှီးမှုက ယုတျလြော့သှားလို့ မရဘူး။
သင့ျဘဝတဈသကျမှာ စိတျတူကိုယျတူ သူငယျခငြျးကောငျး ဘယျနှယောကျရှိနိုငျမလဲ?
တကယျလို့ အထကျက သူငယျခငြျးမြိုးနဲ့ သငျကွုံဆုံလာတဲ့အခါ သူတို့ကို တနျဖိုးထားမွတျနိုးလိုကျပါ။